Orinasa famotehana pile Hydraulika | Mpanamboatra mpamaky solika Hydraulika China
Ny mpamaky paompy hydraulic miaraka amina teknolojia patanty dimy sy rojo azo ovaina, io no fitaovana mahomby indrindra handravana ireo plies fototra. Noho ny famolavolana modular dia azo ampiasaina ny mpanapotipotika amin'ny fanapahana ny haben'ny fantsona. Fitaovana rojo vy. afaka miasa miaraka amin'ny fitaovana isan-karazany izy io mba hanapotehana ireo fantsona.
Breaker Pile Hydraulika SPA8
SPF400A Hydraulika Pile Breaker
Ny mpamaky paompy hydraulic miaraka amina teknolojia patanty dimy sy rojo azo ovaina, io no fitaovana mahomby indrindra handravana ireo plies fototra.
SPF500A Hydraulika Pile Breaker
Kitapo herinaratra hydraulic SPS37
Ity paositry herinaratra hydraulic ity dia azo ampiarahana amin'ny mpamily pile hydraulic, breaker hydraulic, angady hydraulic ary winch hydraulic. Izy io dia manana ny mampiavaka ny fahombiazan'ny asa avo lenta, ny habeny kely, ny lanjan'ny maivana ary ny hery matanjaka. Izy io dia azo ampiasaina betsaka amin'ny fikojakojana monisipaly kaontenera, ny fanamboarana ny rano amin'ny paompy, ny asa famonjena ny horohoron-tany sy ny afo, sns. Afaka mitondra fiara mpamonjy voina mitambatra izy io amin'ny asa famonjena ny horohorontany sy afo.
SPL800 Hydraulika mpamadika rindrina
SPL800 Hydraulic Breaker ho an'ny fanapahana rindrina dia rindrina mandroso, mahomby ary mitahiry fotoana. Manapaka ny rindrina na ny antontam-bato avy amin'ny tendrony roa miaraka amin'ny rafitra hydraulic. Ny mpanapotipotika dia mety amin'ny fanapahana ny rindrin'ny antontam-bato ao anaty lalamby, tetezana ary fananganana sivily haingam-pandeha.
Corab Type Grab
Video Parameter Model Coral type grab-SPC470 Coral type grab-SPC500 Range of Pile diameter (mm) Φ650-Φ1650 Φ1500-Φ2400 Hetezo ny isan'ny antontam-bato / 9h 30-50 30-50 Haavo ho an'ny pilotra tapaka isaky ny ≤300mm ≤300mm Manohana ny milina fandavahana Tonnage (excavator) ≥30t ≥46t Dimana misy ny sangan'asa Φ2800X2600 Φ3200X2600 Ny lanjan'ny fanaparitahana antontam-bolo 5t 6t Tsindry fantsom-pandrefesana farany ambony 690kN 790kN Vokatry ny varingarina hydraulic 470mm 500mm Tsindry faratampony ...